Anyị nwere mmasị ịde blọgụ ... Ma ... | Martech Zone
Onweghi ihe ị n’eme ka ị gaa nzukọ ọgbakọ na mpaghara, nke mba ma ọ bụ mba ụwa iji mee ka ị pụọ n’ọfịs ma wulite ikike gị. N’ezie, mmefu ego ime njem siri ike na mmefu ego maka ịga nzukọ nwedịrị ike ịbụ enweghị. Na DK New Media, anyị na-uru nke nzukọ n'ime na-akwọ ụgbọala anya… Detroit na Chicago na Louisville, anyị na-mgbe na-edebe anya maka ọzọ ohere izute anyị na-agụ akwụkwọ.
Otu ihe enyerela aka Lanyrd. Lanyrd bu ihe itunanya n’inye gi ihe omuma ihe nile nke ndi nke netwok na acho ịga! Nke kachasị mma, ọ bụ n'efu! Ọ bụrụ n'ị bụrụ onye nkwalite maka mmemme, ịnwekwara ike ịgbakwunye ogbako gị na ngwa ọrụ! N'ime ọnwa ole na ole sochirinụ, anyị na-eme atụmatụ ịga njem n'etiti Paris, France na Los Angeles, California. Ọ bụrụ na ị nọ na mmemme, gbaa mbọ kwụsị ma kparịta ụka!
Tags: ịde blọgụihechọta ọgbakọchọta ihe omumeMgbakọ Ahịa